चन्द्र चरणको विशेषताहरु र जिज्ञासा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
निस्सन्देह हामी सबैलाई यो फरक थाहा छ चन्द्र चरणहरू यसको माध्यमबाट यो महीनाभर बित्दछ (२ 28-दिन चक्र)। र यो यो हो कि महिनाको दिनमा निर्भर गर्दछ जुन हामी छौं हामी आफ्नो उपग्रहलाई बिभिन्न तरीकाले देख्न सक्छौं। दिन भर एकै स्थान मा मात्र होइन, तर हामी जहाँ छौं अर्धगोलमा पनि निर्भर गर्दछ। पृथ्वीबाट हेरेको बेलामा चन्द्रमाका चरणहरू यसको उज्यालोमा परिवर्तन बाहेक अरु केही हुँदैन। परिवर्तन चक्रीय हो र पृथ्वी र सूर्यको सम्बन्धमा उही स्थितिमा निर्भर गर्दछ।
के तपाई विस्तारमा जान्न चाहानुहुन्छ? चन्द्रमाका चरणहरू के हुन्? र ती किन हुन्छन्? यस पोष्टमा तपाईंले सबै आवश्यक जानकारी पाउनुहुनेछ 🙂
1 चन्द्रमाको आन्दोलन
2 चंद्र चक्र
3 चन्द्रमाका विभिन्न चरणहरू
3.1 लुना न्यूवा
3.2 अर्धचन्द्राकार चन्द्रमा
3.3 क्रिसेन्ट क्वाटर
3.4 Waxing gibbous moon
हाम्रो प्राकृतिक स्याटेलाइट आफैमा घुमाउँदछ, तर यो ग्रह वरिपरि पनि घुमाउँछ। अधिक वा कम पृथ्वीको चारैतिर जानका लागि २ 27,3..XNUMX दिन जति लाग्छ। त्यसकारण, हाम्रो स्थान र सूर्यको सम्बन्धमा यसको अभिमुखिकरणको सम्बन्धमा हामीले यसलाई अवस्थित गरेको स्थितिमा चक्रीय परिवर्तनहरू हामीले यसलाई हेर्ने क्रममा हुन्छन्। चन्द्रमाको आफ्नै ज्योति हो भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि, यो रातको आकाशमा चम्किलो वस्तुका रूपमा देख्न सकिन्छ, यो प्रकाश सूर्यको प्रकाशको प्रतिबिम्बबिना अरु केहि छैन।
चन्द्रमाको कक्षा अघि बढ्दै जाँदा यसको आकार पृथ्वी पर्यवेक्षकबाट परिवर्तन हुन्छ। कहिलेकाँही तपाईं यसको सानो अंश मात्र देख्न सक्नुहुनेछ, अन्य पटक यो सम्पूर्णतामा देख्न सकिन्छ, र अन्य पटक यो मात्र होईन। यसलाई स्पष्ट पार्न, चन्द्रमा आकार परिवर्तन गर्दैन, तर तिनीहरू समान दृश्य र यसको सतहमा प्रतिबिम्बित हुन्छ कि सूर्य को प्रकाश को परिणामस्वरूप दृश्य प्रभाव हो। यी ती कोणहरू हुन् जहाँबाट पृथ्वीका पर्यवेक्षकहरूले तपाईंको क्षेत्रको उज्यालो भाग अवलोकन गर्छन्।
यो हुन सक्छ कि स्पेनमा हामीसँग पूर्णिमा छ, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि यो मोमिंग वा कम हुँदैछ। यो सबै पृथ्वीमा हामी चन्द्रमा हेर्दा कहाँ निर्भर गर्दछ।
उपग्रहको हाम्रो ग्रहको साथ एक ज्वलन्त लिंक छ। यसको मतलब यसको परिभ्रमणको गति अर्बिटल अवधिसँग समन्वय गरिएको छ। यसको कारणले गर्दा, चन्द्रमा आफैंको अक्षमा निरन्तर घुमाउँदै छ जुन पृथ्वीमा सर्कल लगाइन्छ, हामी जहिले पनि चन्द्रमाको उही अनुहार देख्छौं। यस प्रक्रियालाई सिron्क्रोनाइज्ड रोटेशन भनिन्छ। र यो यो हो कि हामी जुनसुकै चन्द्रमा हेर्छौं, हामी जहिले पनि उस्तै अनुहार देख्नेछौं।
चंद्र चक्र करिब २ .29,5।। दिनहरू रहन्छ जस बीच सबै चरणहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। अन्तिम चरणको अन्त्यमा, चक्र पुन: सुरू हुन्छ। यो सँधै हुन्छ र कहिले पनि बन्द हुँदैन। चन्द्रमाको सबैभन्दा प्रख्यात चरणहरू:: पूर्णिमा, औंसी, अन्तिम क्वाटर र पहिलो क्वाटर। यद्यपि ती सबै भन्दा राम्रो परिचित छन्, त्यहाँ अन्य मध्यस्थहरू छन् जुन पनि महत्त्वपूर्ण र जान्न रोचक हुन्छन्।
आकासमा चन्द्रको प्रकाशको प्रतिशत फरक हुन्छ। यो ०% रोशनीको साथ सुरु हुन्छ जब चन्द्रमा नयाँ हुन्छ। त्यो हो, हामी आकाशमा केहि देख्न सक्दैनौं। यो मानि रहेको छ कि चन्द्रमा हाम्रो आकाश बाट गायब भएको छ। विभिन्न चरणहरू देखा पर्दा, पूर्णिमामा १००% सम्म नपुग्दासम्म रोशनीको प्रतिशत बढ्दछ।
चन्द्रमाको प्रत्येक चरण लगभग .7,4..14,77 दिनहरू रहन्छ। यसको मतलब महिनाको हरेक हप्ता हामीसँग लगभग एक आकारमा चन्द्रमा हुनेछ। चन्द्रमाको कक्षा अण्डाकार भएकोले यस पटक र आकारहरू फरक-फरक हुन्छन्। सामान्यतया, चन्द्रमाका सबै चरणहरू जुन अधिक प्रकाश १ XNUMX दिनहरू हुन्छ र ती अँध्यारो चरणहरूको लागि समान।
चन्द्रमाका विभिन्न चरणहरू
चन्द्रमाका चरणहरू वर्णन गर्नु अघि यो कुरा जोड दिन जरुरी छ कि हामी यस पृथ्वीलाई जुन अवस्थाबाट हेर्छौं त्यस चन्द्रमालाई ग्रहण गर्ने एउटै मात्र तरिका हो। एउटै समयमा, पृथ्वीमा फरक फरक फरक स्थानमा दुई जना पर्यवेक्षकले चन्द्रमालाई फरक किसिमले हेर्न सक्दछन्। यथार्थबाट केही पनि छैन, उत्तरी गोलार्धमा एक पर्यवेक्षकले चन्द्रमालाई दायाँ देखि बाँया दायाँ र दक्षिणी गोलार्धमा यो बायाँबाट दायाँ देख्न सक्छ।
यो स्पष्ट पछि, हामी चन्द्रमाका विभिन्न चरणहरू वर्णन गर्न थाल्छौं।
यसलाई अमावस्या पनि भनिन्छ। यस चरणमा, रातको आकाश धेरै कालो छ र अन्धकारमा चन्द्रमा पाउन एकदम गाह्रो छ। यस समयमा, हामी देख्न नसक्ने चन्द्रमाको टाढा भाग सूर्यले प्रकाशित गरेको छ। जे होस्, यो अनुहार पृथ्वीबाट देख्न सकिदैन किनकि माथि उल्लेखित सिnch्क्रोनाइज घुमावको कारण।
चरणहरू जुन चन्द्रमाबाट पार हुन्छ, नयाँ देखि पूर्ण सम्म, उपग्रह यसको कक्षाको १ degrees० डिग्री यात्रा गर्दछ। यस चरणको बखत यो ० र degrees 180 डिग्री बीच चल्छ। हामी मात्र गर्न सक्दछौं ० र २% बीचमा चन्द्र हेर्नुहोस् जब यो नयाँ हुन्छ।
यो त्यस्तो चरण हो जुन हामी नयाँ चन्द्रमाबाट or वा days दिन पछि चन्द्रमालाई भेट्न पाउँछौं। हामी पृथ्वीमा भएकोमा निर्भर गर्दछौं हामी यसलाई आकाश वा अर्को पट्टिबाट देख्नेछौं। यदि हामी उत्तरी गोलार्धमा छौं भने, हामी यसलाई दायाँबाट देख्नेछौं र यदि हामी दक्षिणी गोलार्धमा छौं भने हामी यसलाई बाँया पट्टि फेला पार्नेछौं।
यस चन्द्रमाको चरणमा यो सूर्यास्त पछि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यसैले यस चरणमा यसको कक्षाको 45 90 र XNUMX ० डिग्रीको बीचमा यात्रा गर्दछ। यस भ्रमणमा चन्द्रमाको देखिने प्रतिशत to देखि% 3% छ।
यो जब चंद्र डिस्कको आधा उज्यालो हुन्छ। यो दिउँसो देखि मध्य रातसम्म देख्न सकिन्छ। यस चरणमा यो यसको कक्षाको 90 ० र १ 135 डिग्री बीच यात्रा गर्दछ हामी यसलाई and 35 र% 65% बीचमा उज्यालो देख्न सक्छौं।
आधा भन्दा बढी क्षेत्र छ। यो सूर्योदयभन्दा पहिले सेट हुन्छ र साँझमा आकाशको सब भन्दा माथिल्लो शिखरमा पुग्छ। देखिने चन्द्रमाको अंश and 66 र%%% बीचको छ।
यसलाई पूर्णिमाको रूपमा पनि चिनिन्छ। हामी त्यस चरणमा छौं जुन चन्द्रमा पूर्ण रूपमा देखिन्छ। यो हुन्छ किनभने सूर्य र चन्द्रमा यसको केन्द्रमा पृथ्वीको साथ सिधा प .्क्तिबद्ध छन्।
यस चरणमा यो १ moon० डिग्रीमा नयाँ चन्द्रमा भन्दा पूर्ण रूपमा विपरित स्थितिमा छ। यो and and र १००% चन्द्रमा देख्न सकिन्छ।
पूर्णिमा पछि, निम्न सम्बन्धित चरणहरू हुन्:
ढल्दै रहेको चन्द्र
यी सबै चरणहरूको अर्धचन्द्राकारको समान विशेषताहरू छन्, तर घुमाउरो विपरित दिशामा अवलोकन गरिन्छ (हामी जहाँ छौं अर्ध गोलार्धमा निर्भर गर्दछ)। चन्द्रमाको प्रगति तलतिर छ जबसम्म यो फेरि नयाँ चन्द्रमामा पुग्दैन र चक्र पुनः सुरु हुँदैन।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ चन्द्रमाका चरणहरू स्पष्ट भएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चन्द्र चरणहरू
जोन डाल्टन जीवनी
जलविज्ञान चक्र वा पानी चक्र